अपांंगता आकस्मिक हुन सक्छ, त्यसैले शहरलाई अपाङ्गमैत्री बनाऔं
जीवन काँडा कि फूल ? यो प्रश्न अपांगता भएकी झमक घिमिरेको मात्र होइन, हामी सबैको मन र दिमागमा छ । जीवनको तितो, मिठो भोगाइले यो प्रश्न हर एकको लागि रहस्यमीको रुपमा महत्व राख्छ । कसैलाई अनुभव होला अनि कसैलाई नहोला त्यो भने फरक पाटो हो । हामी भविष्यका कल्पना गर्छौं, योजना बनाउँछौं । तर ती योजना र कल्पनालाई कुनै भवितव्यले बेकार बनाइदिन सक्छ । शारीरिकरुपमा अपांग बनाइदिन सक्छ ।
कतिपय मानिस ज्योतिषलाई भविष्य देखाएर ढुक्क हुन खोज्छन् । तर जन्म पश्चात बनाईने हाम्रो चिना बनाउने मान्छेलाई पनि थाहा छैन । उनीहरुले त ग्रहलाई दोष देखाउँदै आएका छन् र त्यो क्रम हाम्रो समाजमा चलि नै रहन्छ ।
हो, सवाल अपांगताकै हो ।
आज कोही सवलाङ्ग छन् त कोही विकलांग । कोही जन्मजात त कोही दुर्घटना र रोगका कारणले शारीरिक अपांग छन् ।
यि सबै विषयहरु मैले उठाईराख्दा आपङ्ग भन्दा पनि फरक क्षमता भएका व्यक्तिका सवालहरु हुन् । किनकी मानिस सर्वगुण सम्पन्न कहिले हुन सक्दैन । उसको चाहनाले पनि त्यो सीमालाई पहिल्याउन सक्दैन । तर हामी त्यही आकांक्षा राख्छौं । भयो भने त ठिकै छ, भएन भने पूर्ण जन्मलाई दोष लगाउँछौं । तर अपांगता पुर्व जन्मको अभिषाप होइन ।
यो सोँचलाई बदल्न आवश्यक छ । तर खाली अपाङ्गता भएका व्यक्तिले एकोहोरो सवाल मात्र उठाएर हुन सक्दैन । यसमा नागरिक समाज, बुद्धिजिवी, उद्योगी, व्यवसायी, राजनितिक दल, सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानिय सरकार र आम जनताको पनि महत्वपूर्ण भुमिकाको आवश्यकता छ ।
आज हामी जब आफुलाई पर्छ, तब मात्र यस्ता विषयहरुलाई सोच्छौं । चिन्तन गर्छौं । तर अरुका समस्यालाई सितिमिती अनुभुती गर्न सक्दैनौं । यसको मतलब अपाङ्गता भएकाहरुको विषयमा आवाज उठेको छैन भन्ने होइन । तर त्यो आवाज निकै सानो छ । आफै पनि आवाज उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ अनि यसमा आम नागरिकहरुको साथ पनि चाहिन्छ ।
किनकी आजका सवलाङ्ग भविष्यमा अपाङ्ग हुन सक्छन् । तर आजको समस्या भोलीको पिढिले भोग्न नपरोस भन्ने हो । उनीहरुमा घरबाट बाहिर गएर केही गर्न सक्छु भन्ने वातावरण बनोस् ।
खासगरी प्रतिभा विकास, रोजगारी, आधारभुत आवश्यकताको परिपूर्तीको क्षेत्रमा अपांगहरुलाई सहयोगको आवश्यकता छ । आज हामीले गर्न सक्यौँ भने भोली आउने पुस्ताले भवितव्यबाट अपांग हुँदा सहज रुपमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो ।
यो सबै म आफू शारीरिक रुपमा अपांग छु भनेर भनेको होइन, बरु यो त सबैलाई पर्न सक्छ । मैले पनि केही वर्षअघिसम्म कहाँ सोचेको थिएँ र म कुनैदिन ह्वील चेयरमा हिड्छु भनेर तर भयो त्यस्तै । एउटा दुर्घटनामा मेरो ढाडको हड्डी भाँच्चियो, कामै नलाग्ने गरी । त्यसपछि म अहिले ह्वीलचेयरमा डुल्छु । तर मलाई न यहाँको बाटो सुरक्षित लाग्छ, न त यहाँका सरकारी कार्यालयहरु नै सहज लाग्छ । यहाँसम्म कि मैले प्रयोग गर्ने चर्पी नै पनि छैन ।
अपांगता भएका मानिसहरु समाजलाई चाहिँदैन भन्ने खालको सोँच विकास भएको छ । नीति निर्माण तह र सरकारी निकायले नै यो विषयमा ध्यान दिएको पाईँदैन । त्यसैले त सरकारले बनाएका संरचना र पूर्वाधारहरु अपांगमैत्री छैनन् । सडक, कार्यालय, शैक्षिक संस्था, सरकारी कामकाज हुने संस्थामा उपयुक्त संरचनाको अभाव हुँदा थप समस्या भोग्नु परिरहेको छ ।
सरकारले हरेक बर्ष विकास निर्माणका परियोजना ल्याएका छन, भवन सडक, पुल, कार्यालयजस्ता संरचना अपाङ्गमैत्री छन् त ? हरेक बर्ष अपाङ्गता भएको व्यक्तिका लागि विभिन्न शिर्षकमा बजेट विनियोजना हुन्छ । त्यसको पारदर्शीता खोई ? सरकारले प्रत्येक महिना दिने घोषणा गरेको छ, दिएको पनि छ । भत्ता लिन अपाङ्गताको कार्ड बनाउन भन्छ, सिफारिस लिन आऊ भन्छ तर त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बाटो खै ? कार्यालयको सिँढी कसरी उक्लने ? चर्पीमा दिसापिसाब कसरी गर्ने ? यी सबै समस्याले गर्दा शारिरीक अपाङ्गता भएका व्यक्ति मानसिकरुपमा समेत पीडित भइरहेका छन् ।
त्यसैले नगरलाई अपांगमैत्री बनाउन निम्नलिखित प्रस्तावहरु उपयुक्त हुनुसक्छन् :
१. अपाङ्गमैत्री शहर इटहरीलाई देशको नमुना शहरको रुपमा परिणत गर्ने ।
२. अपाङ्गमैत्री आवश्यक पूर्वाधार, शौचालय, खेलकुद साथै प्रशिक्षण कार्यक्रम गर्ने
३. शारिरीक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सामाजिक र मानसिक रुपमा प्रेरणा जगाउने प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना गर्ने ।
४. अपाङ्गमैत्री शौचालय सुलभ शौचालय हरेक कार्यलय र बजार क्षेत्रमा निर्माण गर्ने ।
५. अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई क्षमता अनुरुप हरेक कार्यलयमा सहभागि गराउन पहल गर्ने ।
६. सरकारी बजेट र अन्य दातृ संस्थाबाट प्राप्त अपाङ्गगता सम्बन्धि रकमको पारदर्शीता ।
७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पहिचान खुलाउने विधान अनुसारको बर्गिकरण र सेवा सुविधाका बारेमा हरेक सरकारी कार्यलयमा र बजार क्षेत्रमा होडिङ्गबोर्ड व्यवस्था गर्ने ।
Lekha yakdam ramro xa hami apagata vayako bekti Sarai samaj Bata helit hudo rahexau yo mero vogayi ho ra kunai sarakari subidha pani natabata kayam hudo rahexa aakhira yo sabai......... Ho jasto lagxa